Pelosi: Canshuurta Trump Waa Arin Amniga Qaranka Quseyso
Tuesday September 29, 2020 - 10:22:11 in Latest News
"muddo sanado ah uu madaxwayanha ka maaganayay bixinta canshuurta",.
Xubin sare oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo ku sugan magaalada Washington ayaa madaxweyne Trump ugu baaqay inuu ka fogaado isdabamarinta canshuurta maadaamaa ay 'amniga qaranka' saameyneyso.
Nancy Pelosi oo ah guddoomiyaha golaha wakiillada shacabka ayaa weydiisay madaxweyne Trump lacagahaasi inuu u bixin isaga oo eegayo dano shisheeye iyo inkale.
Hadalka Pelosi ayaa imanaya kaddib marki uu waregsyaka New York Times uu daabacay warbixin ku saabsan xog ay ka heleen isdabamarinta canshuureed ee madaxweyne Trump.
Ms Pelosi oo NBC la hadleysay waxay sheegtay warbixinta wargeyska uu qoray iney tilmaameyso "Madaxweynaha inuu qaatay deyn ka badan $400 oo malyan oo doolar".
"Arrintan waxaa ka dhalaneysa su'aal la xidhiidha amniga qaranka" ayey tri.
"Xaqiiqatan madaxweyne xil hayo oo leh boqollaal milyan oo hanti u gaar ah inuu canshuur isdaba mariyo mid laga filayy ma aha, mana garan karno cidda uu madaxweynaha uu deynta u qaaday ama dartii uu canshuurta iisu daba mariyey," ayey tiri iyada oo intaasi raacisay ma wuxuu sidaasi u sameeyey madaxweynaha Ruushka Viladmir Putin dartii.
Sida ay tilmaameyso warbixinta yaabka leh uu wargeska New York Times uu ka qoray arrimaha canshuuraadka madaxweyne Trump 10-15 sana oo ugu dambeeyey ineysan jirin wax canshuur ah u madaxweyne Trump dakhliga soo gala u ka bixiyey.
Wuxuuna wargeysku intaasi ku daray inuu Trump shaqsi ahaan uu qaatay amaah dhan $300 oo malyan oo doolar oo uu iska celinayo afarta sana ee soo socota.
Mr Trump ayaa warbixinta uu qoray wargeyska ku tilmaamay "been abuur".
Madaxwayne Trump ayaa marar badan la kulmay caqabado dhanka sharciga ah ka dib markii uu diiday in uu hay'adaha ay quseyso la wadaago dokumantiyada la xiriira inta ay dhan tahay hantidiisa iyo ganacsiyadiisa.
Macluumaadkan uu daabacay wargeyska ayaa ku soo beegmaya maalmo uun ka hor xilli lagu wado in Mr Trump uu ka qeyb galo dood loo qabanayo isaga iyo musharaxa madaxwaynanimada xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden .
Maxay yihiin eedeymaha ugu muhiimsan?
Wargeyska New York Times ayaa baaritaan ku sameeyey sida ay canshuuraadka u bixiyaan shirkadaha gaarka uu u leeyahay madaxweyne Trump laga soo billaabo 1990, 2016-kii iyo 2017-kii.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in madaxwayne Donald Trump uu bixiyay oo kali ah $750 doolar oo ah canshuurta dakhliga sanaddii 2016, oo ahaa markii uu xilka u tartamay iyo sanadkii ugu horeeyay ee aqalka cad uu yimid, 10-15-kii sano ee ugu dambeeyeyna wax canshuur ah uusan bixin.
Wargeysku wuxuu intaasi ku daray ganacsiga ugu weyn uu madaxweyne Trump leeyahay sida huteellada iwm "iney diiwaangeliyeen sanada badan iney malaayiin doolar khasaareen'.
Wargeyskuna wuxuu sheegay labadi sano ee ugu horreysay uu madaxweynaha aqalka cad ee Mareykanka jogay dibadaha iney uga soo xaroodeen dakhli dhan $73 malyan oo doolar.
Shirkadaha Trump uu leeyahay waddamada ay heshiiska dhinaca shatiyada ah ay la galeen waxa ka mid ah Philippine $3 malyan oo doolar, Hindiya $2.3 malyan oo doolar iyo Turkiga oo $1 malyan o doolar ah.
Sida ay tilmaameyso xogta laga helayo waaxda shaqaalaha Mareykanka qoys kasta oo Mareykanka ku nool dakhliga sanaddi 2018-ki soo galay iney ka bixiyeen canshuur dakhli oo dhan $9,302, iyada oo tusaala ahaan loga soo qaatay qoyska inuu celcelis ahaan sanadki uu soo galo dakhli dhan $78,635 doolar.